वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो : शक्तिबहादुर बस्नेत- वन तथा वातावरणमन्त्री :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो : शक्तिबहादुर बस्नेत- वन तथा वातावरणमन्त्री
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दावी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
सेवा प्रवाहको दृष्टिले अन्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारीको कोणबाट समीक्षा गर्छौं, मलाई लाग्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति काम गर्यो भनेर अन्य सेवाग्राही, सरोकारवालासँग लिने प्रतिक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएका समीक्षाका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इतिहासमा जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबाट हेर्दा हामीले महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेका छौँ । चाहे नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, संरचनागत, योजना निर्माण र कार्यान्वयन र सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधार गरेका छौँ ।
हाम्रा ऐन, कानून, मान्यता वन आर्थिक क्षेत्र हो भन्ने मान्यताबाट कहिल्यै पनि निर्देशित भएन । हामीले नेपाल वन ऐन, राष्ट्रिय वन नीति, नेपाल वन नियमावलीलगायत दस्तावेजमा हरियो वन नेपालको धन बन्नुपर्छ त्यसका लागि वन आर्थिक क्षेत्र हो, यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति वनको समग्र क्षमतामा बहुआयामिक ढङ्गले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले कानूनतः स्थापित गरेको छौँ । अब हरियो वन नेपालको धनका रुपमा विकास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
वन पैदावरमा अधारित उद्यमको विकास गर्न वन आर्थिक क्षेत्र हो भनेर परिभाषित गर्नु पहिलो सर्त हो । आर्थिक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार नगर्ने अनि वन उद्यम विकास भएन भन्नु अन्तरविरोध हुन्छ । वन पैदवारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकताममा राखेका छौँ । संरक्षणमुखी ऐन, कानून तथा नीतिका कारण उद्यम विकासमा परेका अप्ठ्यारालाई फुकाउनका निम्ति सहजीकरणका काम गरेका छौँ ।
वन्यजन्तु र मावनको सम्बन्ध अन्तरविरोधी बन्न पुगेको छ । हामीले वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोचेका छौँ । हाम्रो क्षमताले कति धान्छ, कति आवश्यक छ, त्यसको रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । यस्तै वन्यजन्तुको पालन र प्रजननमा पनि हामीले नीतिगत, कानूनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ । यही वर्षदेखि हामी वन्यजन्तुको पालन र प्रजननका कामलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ । यसले वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनले चोरी–सिकारी पनि नियन्त्रण गर्छ ।
संरक्षण क्षेत्रको क्षमता सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यस क्षमताभित्रका वन्यजन्तुलाई त्यही राख्ने र बाँकीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि वा अन्य कुनै विधिद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो रु तेस्रो कदम यति गर्दागर्दै पनि फेरि द्वन्द्व सम्पूर्ण रुपमा निवारण हुन्छ त रु भन्दा केही न केही बाँकी हुन्छन् । वन्यजन्तुले आएर भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्याएको अवस्थामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीन क्षेत्रबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति सघाउन पुर्याउँछ । हामी यही ढङ्गबाट काम गरिरहेका छौँ ।
प्राणी उद्यानका रुपमा विकास गरेर केही वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीले ठूलो क्षेत्र समेट्ने गरी भक्तपुरको सूर्यविनायकमा प्राणी उद्यान निर्माण गर्न गुरुयोजना सम्पन्न गर्यौँ । यस वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्दैछौँ । डीपीआर सम्पन्न हुने बित्तिकै निर्माण गर्नेछौँ । सबै प्रदेशमा पनि प्राणी उद्यान निर्माण गर्नुपर्छ । केही स्थानीय तहले पनि प्राणी उद्यान निर्माण गर्छौं भनेका छन् । प्राणी उद्यानको नियमन र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी संयत्रको आवश्यकता पनि हामीले गरेका छौँ ।
यो आंशिकरुपमा सत्य हो । चितवनबाट बर्दियामा स्थानान्तरण गरिएको गैँडा हुर्कनै नसक्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो । त्यसको सम्भावना नै छैन भन्ने होइन, सङ्क्रमणको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था अलि कमजोर हुँदा समस्या आएको हुनसक्छ, त्यसबेलामा पुर्याउनुपर्ने ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । तर यो आजको कुरा होइन, धेरै अघिको हो । जतिबेला नेपाल चर्को सङ्क्रमणको ढङ्गबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिबेला राज्यका तर्फबाट पुर्याउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत सम्बन्धित निकायबाट पुर्याउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय नपुगको अवस्था थियो ।
बाघ र गैँडा संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा हुने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हाम्रा नीति कानूनका कारण विकासलाई प्रभावित बनाएका कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको छौँ । हामीले विकास विरोधी कानूनलाई सुधार गरेका छौँ । सुधार के भनेर ग¥यौँ भने, पहिलो विकास आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कहीँ सानो एउटा पानी ट्याङ्की निर्माण पर्यो भने कि इआए कि आइई गर्नुपथ्र्यो । अत्यन्त साना आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन’ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रथामिकताका आयोजनामा ‘जमिनका लागि जमिन’ उपलब्ध गराउने अथवा कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्यो भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निजी जमिन किनेर वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछिमात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाका कारणले नेपालमा निजी जमिनको व्यवस्थापनका विषय निकै जटिल छ । यो सबैलाई अवगत नै छ । यसले गर्दा त्यही इलाकामा जमिन किनेर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो भने वन क्षेत्रै किन लिन जानुपर्छ र लगानीकर्तालाई । त्यो भए त निजी जमिन किनेर उद्योग बनाउनेतर्फ लागिहाल्छन् । यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, केही महत्वपूर्ण अन्य आयोजनाका निम्ति हामीले ‘जमिनका लागि जमिन’को सट्टा ‘जमिनका लागि रकम’को व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि हामीले उपयुक्त र प्रस्ट व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसका लागि वन ऐनमै वन विकास कोषको व्यवस्था गरेका छौँ ।
त्यही कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा वन विकासबाहेक अन्यन्त्र खर्च गर्न पाइन्न । वृक्षरोपण, वन संरक्षण र विकासमै खर्च हुन्छ । यसले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यो काम तत्काल गर्दैछौँ । यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षलाई पाँच करोड वृक्षरोपण वर्ष भनेका छौँ । पाँच करोड बिरुवा रोप्दै छौँ । यसको ठोस् कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ । वृक्षरोपणसम्बन्धी बुझाइ त्यति राम्रो छैन नेपालमा । तर यस वर्ष हामीले कहाँ कुन बिरुवा रोप्यौँ, त्यसको अवस्था के छ ? प्रस्ट हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं । वृक्षरोपणसम्बन्धी मान्छेका बुझाइ हामी बदल्छौँ ।
प्रश्न काठ काट्ने कुरामात्र गरेका छैनौँ, ढलापढा रूखको व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ । अब उमेर सकिन थालेका रूखलाई राखेर त भएन नि । नयाँ रूख रोप्नुपर्यो । बुढो रूखको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो । रूख त्यसै कुहिन दिन भएन, अनावश्यक लगानी भइरहेको हुन्छ । एउटा निश्चित अवस्थासम्म रूखको राम्रोसँग संरक्षण गरौँ । निश्चित आयुपछि त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।
हो, रूख कटान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ । भलै अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । सङ्घीयताको विषयमा अलमल हुँदा कतिपय समस्या देखिएका छन् । मान्छेका बुझाइका समस्या छन् । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय नबुझ्दा सङ्घीय सरकारले काम गर्यो कि गरेन भनेर अलमलमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम छ, त्यो सङ्घीय सरकारले गर्यो कि गरेन भनेर खोज्न आइरहेका हुन्छन् । कतिपय प्रदेशले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम छन्, त्यो सङ्घीय सरकार वा स्थानीय सरकारमा खोज्न गइरहेका हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले सम्पादन गर्ने कामको पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक सङ्गठन ९युनेस्को० को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा पर्यटकको चाप राम्रो छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण आधार शिविर र लाङटाङ क्षेत्रमा पनि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ । मैले भनेको पूर्वाधार विकासका कुरा यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैनन् ।
रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटामा पर्यटक जानु पर्दैन, आज किन त्यहाँ पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । किन चितवन, सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङमा मात्र पर्यटक गइरहेका छन् । यसको जवाफ के त त्यहाँ न्यूनतम् पूर्वाधार छैनन् । बाँकी ठाउँमा न्यूनतम् पूर्वाधार छन् । हो अब न्यूनतम् पूर्वाधार ती ठाउँमा बनाएरपछि नयाँ गन्तव्य खुल्छन् नि त । पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले सघाउन पुर्याउँदैन, यो कुनै बेठीक कुरा भयो रु यसले संरक्षणमा कुनै चुनौती थप्छ रु चितवन, सगरमाथामा न्यूनतम पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा ठीक त्यही कुरा रारा, खप्तड, मकालुलगायतमा गर्दा बेठीक हुन्छ रु
समस्यासँग जुध्ने क्षमताको कसरी विकास गर्ने, मानवको प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने क्षेत्रमा खर्च गर्छौं । त्यो भनेको के हुनसक्छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै ठाउँमा पानीको मुहान सुक्यो, खानेपानीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ वातावरणमा मानिसलाई कसरी अनुकूलन गराउने, आकाशेपानीको सञ्चय गरेर खानेपानी सुविधा पुर्याउने हो वा लिफ्ट गरेर पानीको व्यवस्था गर्ने हो कि । यस्तै प्रयोजनका लागि प्राप्त रकम खर्च गरिन्छ । नागरिकको पोषण तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा ती रकम खर्च गरिन्छ ।
हाम्रो बजेटरी सिस्टममा नआएका र बीचैमा अलमलिएका अन्य दातृ निकायबाट खर्च हुने रकमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालित गरेको छौँ । जस्तो विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालीकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु गर्यौं ।
शेयर बजारमा २ अर्ब ६३ लाखको कारोबार, नेपाल बैंक कारोबारमा अब्बल !
१ शेयर बजारमा २ अर्ब ६३ लाखको कारोबार, नेपाल बैंक कारोबारमा अब्बल!
२ सिभिल बैंकले नेप्सेलाई दियो यस्तो जवाफ !
३ Employees Provident Fund
४ प्रभु लाइफले बोलायो वार्षिक साधारणसभा
५ सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
६ नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्तबीच एकिकृत कारोबार सुरू
७ प्राइम लाइफले बोनस शेयर धमाधम शेयरधनीको खातामा पठाउँदै, नआए के गर्ने ?
८ कात्यायनी बचत तथा ऋण सहकारीद्वारा साधारणसभा आह्वान
९ डिशहोमको दशैंमा डवल धमाका !
१० एनआरएन लद्युवित्तले एफपिओ निष्काशन गर्ने, बोलायो बिशेष साधारणसभा